Resaky ny mpitsimpona akotry : lasa omaly dia tonga indray | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : lasa omaly dia tonga indray
Tsy mbola nisinda akory ny farasisa, mbola mivandravandra ny tako-pery dia io mandondona sahady ilay aretim-be atao hoe krizy. Toy ny rivo-doza mifofofofo mandravarava, loza no aterany. Tsy mora ny fanarenana izany fa mitaky ezaka. Tsy mora toy ny filazana azy fa mandany fotoana. Tsy misy ifandraisany amin’ny fahaingan’ny fandalovany.
Raha topaza-maso toy ny fangalana sary indray mipika ny fandehan-draharaha sy ny fizotran’ny fiarahamonina dia mahaketraka be ihany. Ny vidim-piainana midangana efa tsy ho araky ny maro nefa ao anatin’ny fotoan-tsarotra isedrana fahasahiranana manokana eo anivon’ny fahasahiranana mahazatra. Eo an-daniny moa ny maitso ahitra fa eo an-kilany koa ny fahasarotana noho ny tsy fahaizan’ny fanjakana maka fepetra mialoha entina hisorohana ny fahasahiranana ateraky ny tonon’andro tsy famokarana. Manaraka izany koa ny fiavosan’ny adidy tsy maintsy efaina eo amin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra ho an’ny fianakaviana manana ankizy maro. Olana izay toa nifamotoana tamin’ny fisehon’
ny aretina pesta izay tsy tongatonga ho azy. Izy mirongatra toy izao, tsy mitory fandrosoana hany fa toa maneho porofo manambara fihemorana. Inona anefa no azo antenaina avy amin-dRafanjakana? Raha vao nanangasanga ilay resaka “fitsaboana ny Lalampanorenana” dia rafitra ny ady ao amin’ny sehatra pôlitika. Ady miitatra aty ivelany, manambana hampitresaka roa ny firaisa-monina. Fampihavanam-pirenena no ventimbetesina fampisarahana no miseho.
Nanazava ny antony nitarika ny fikasana hanaovana fanitsiana ao anatin’ny Lalàmpanorenana ny tompon’andraikitra, ny fisorohana olana mety itranga manodidina ny fifidianana ny filohampirenena manaraka mitaky ilay faninginana aroso hoy izy ireo. Ny hita miseho anefa dia ilay aro-afo kasaina hapetraka anefa toa vao miha toy ny fitsofana vain’afo tonga dia nampiredareda lela afo.
Mivaibaitra noho ny fahasarotam-piainana ny vahoaka tototry ny fahasahiranana, manginy fotsiny ny fitaintainana andro aman’alina na hitakoko ao an-trano na irahan’ny adidy any ivelany dia tsy afa-bela amin’ny fitandondonan’ny herisetra mety hitranga tsy mila fametraham-potoana rehefa toy izao tsy voafehin’ny lohany dia lasa tsy zakan’ny tsenan’ny fitondrana ny fandriampahalemana. Izao indray lasa matahotra ny ampitso noho ny toe-draharaha mitady hivadika biby tsy ho ela.